Mourinho oo magacaabay AFARTA kooxood ee xili ciyaareedkan ku guuleysan karta Premier League – Gool FM
Mourinho oo magacaabay AFARTA kooxood ee xili ciyaareedkan ku guuleysan karta Premier League
(England) 11 Agoosto 2019. Jose Mourinho ayaa u caleymo saaray 4 kooxood inay ku guuleysan karaan xili ciyaareedkan 2019/2020 horyaalka Premier League, isagoo meesha ka saaray Manchester United iyo Chelsea, kuwaasoo ah laba kooxood uu horey macalin u soo noqday.
Macalinka reer Portugal ayaa inta uu ku gudi jiray falaqeynta ciyaarta maanta ee Man United iyo Chelsea wuxuu sheegay:
“Waxaa jira 4 koox ee loo caleemo saari karo ku guuleysiga horyaalka Premier League, waana kooxaha Manchester City, Tottenham, Liverpool iyo kooxda labaad ee City”.
“Marka aan fiiriyay keydka Manchester City kulankii shalay ee West Ham United, waxaan u maleynayay inay u tartami karaan hanashada horyaalka”.
“Waxaan rajeynayaa inaan ku arko kooxaha Manchester United iyo Chelsea heerkaas oo kale, mararka qaar waxyaabo aan la fileynin ayaa ka dhaca kubada cagta”.
“Laakiin qof walba wuxuu ku raacsan yahay in Manchester City iyo Liverpool ay yihiin labada ugu cadcad, Skay Blues waxay ku guuleysatay wax walba ee England ah, halka Reds ay tahay kooxda heysata koobka Champions League”.